Tag: lacagaha mobilada | Martech Zone
Tag: lacagaha mobilka
Khamiista, Diseembar 24, 2020 Khamiista, Diseembar 24, 2020 Tanya Singh
Baaxadda suuqa lacag bixinta dhijitaalka ah ee adduunka ayaa la filayaa inay ka bilaabanto USD 79.3 bilyan sannadka 2020 illaa USD 154.1 bilyan sannadka 2025, marka loo eego heerka kobaca sanadlaha ee isku darka (CAGR) ee 14.2% MarketsandMarkets Dib u milicsasho, ma haysanno sabab aan uga shakinno lambarkan. Haddii ay wax jiraan, haddii aan tixgelinno dhibaatada hadda jirta ee loo yaqaan 'coronavirus', koritaanka iyo korsashada ayaa soo dedejin doonta. Fayras ama fayras la'aan, kororka lacagaha aan lala xiriirin ayaa horeyba u jiray. Tan iyo boorsooyinka casriga ah been
Taleefannada casriga ah iyo kumbuyuutarradu waa aalado caan ah oo dadku maalin kasta isticmaalaan. Markay tahay ecommerce, lacagaha mobiladu waxay noqonayaan ikhtiyaar caan ah, iyada oo ay ugu wacan tahay fudaydka iyo sahlanaanta samaynta lacag bixinta meel kasta, wakhti kasta, qasabado yar. Ganacsade ahaan, kor u qaadida habka lacag bixinta ee moobiilku waa maalgashi qiimo leh oo u horseedi doona kordhinta qanacsanaanta macaamilka, iyo ugu dambeyn - iibin badan. Nidaamka lacag-bixinta oo liita ayaa kaa joojin doonta adiga